DAW AUNG SAN SU KYI | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်နိုင် October 31, 2012
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,OTHERS' POEMS — Nyo Gyi @ 6:22 pm
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်နိုင်
ရန်ကုန်မြို့  ကြီး အာရှ အလှဆုံးမြို့  ကြီး ဖြစ်နိုင်
ကမ္ဘာကြီး မကြာမီ ငြိမ်းချမ်းရေး ရနိုင်
မည်သူမဆို ကြိုးစား ဘုရား ဖြစ်နိုင်
Mandalay ICON Magazine, Vol 4, No 12, Nov, 2012
ပွင့်သစ်လွင်ပြင် ပန်းချီပြပွဲ(မန္တလေး) ကို ကြံ့ဖွတ်က ခြိမ်းခြောက် February 6, 2012
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,MY NEWS,NLD,PHOTOS,SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION — Nyo Gyi @ 3:25 pm
Daw Aung San Suu Kyi sentaletter to Mandalay People February 4, 2012
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,MY NEWS — Nyo Gyi @ 3:54 pm
မန္တလေးပြည်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှုကို လေးစားတန်ဖိုးထားသလို
မန္တလေးပြည်သူလူထုရဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့
တည်ငြိမ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း သိနေပါတယ်။
ခရီးစဉ်ကို ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရပေမယ့် အဆင်ပြေအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာ
ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြား ပိုမိုနားလည်မှုတွေ ရရှိလာမယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။
မန္တလေးကို မူလကမှန်းထားတာထက် ပိုပြီးနောက်ကျမှ ရောက်လာရမှာမို့
ကျွန်မတို့နဲ့ ပြည်သူအကြား ပိုမိုမေတ္တာပွားပြီး ပိုမိုနွေးထွေးတဲ့ ပြန်လည်ဆုံဆည်းမှု ဖြစ်မယ်လို့
———————– ဆက်စပ်သတင်း ———————–
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မန္တလေးသူ၊ မန္တလေးသားများအကြား ကြံ့ဖွတ်စစ်အဆိုးရ သွေးခွဲနေ
(၄၊ ၂၊ ၂၀၁၂)
ဒီနေ့(၄.၂.၂၀၁၂) စနေနေ့ နံနက်ပိုင်းက မန္တလေးမြို့ပေါ်နေရာအချို့တွင် လည်းကောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လာရောက်မည်ဆိုသော မန္တလေးရှိ ကွင်းအချို့အနီးတွင်လည်းကောင်း ( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၄.၂.၂၀၁၂ မန္တလေး မလာနိုင်အောင် ကြံ့ဖွတ်စစ်အဆိုးရက ကလိကမာကျကာ အကွက်ဆင်ထား၍ ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန္တလေးမလာဖြစ်သည်ကို မသိသေးသော စုချစ်သူများလာရောက် စောင့်ဆိုင်းမှုများရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
အချို့ စုချစ်သူများဆိုလျှင် နယ်ဝေးများမှ ကားများနှင့် အစောကြီးကတည်းက မန္တလေးမြို့ပေါ် တက်လာကာ မန္တလေးရောက်မှ စုမလာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်ဟု ဆို၏။ မန္တလေးမှ နယ်ပြန်စရာ ရှိသူအချို့လည်း စုလာမည်ဆို၍ နယ်မပြန်သေးဘဲ စုကို အားပေးထောက်ခံကြိုဆိုရန် မန္တလေးမှာ နေရစ်ခဲ့သူများလည်း ရှိသည်ဆို၏။ အချို့ဆိုလျှင် စုလာမည့်ရက် (ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်၊ ၅ ရက်) မအားမရှိရအောင် အလုပ်များ အားအောင် ရွှေ့ဆိုင်းထား၊ အလုပ်ချိန်များ ရွှေ့ဆိုင်းထားရခြင်းများပင်ရှိသည်ဆို၏။
“ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်၊ ၅ ရက် မန္တလေးကို စုမလာဖြစ်တော့ဘူး” ဟု စုမလာဖြစ်သည်ကို မသိသေးသူများအား ပြောလိုက်လျှင် “ဟာ…ကွာ” ဟု စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်ကာ “ဒါဆို စု က မန္တလေးကို လာဖြစ်ဦးမှာလား။ ဘယ်တော့လာမှာလဲ” ဟုသာ ပြန်မေးတတ်ကြကြောင်းလည်း ကြားသိရပါသည်။
စာ-ဓာတ်ပုံ အား အရည်အသွေးမြင့်မြင့်နှင့် ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးကြီး ဒေါင်းလုပ်ရယူလိုသူများအတွက် 4.5 MB ပမာဏရှိသော ပုံအား
တွင် upload တင်ထားပါသည်။
ရှေ့ဆက်၊ ဆက်လက်၊ လက်တွဲ၊ တိုက်ပွဲဝင်ကြပါဦးစို့ !
Daw Aung San Suu Kyi’s Feb 4-5 trip to Mandalay has been cancelled! February 3, 2012
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,OTHERS' NEWS,PHOTOS — Nyo Gyi @ 4:49 am
Poet Yoe D’s2Poems for Freedom Day of Burma (13, Nov) January 13, 2012
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,OTHERS' POEMS,PHOTOS — Nyo Gyi @ 12:38 am